Amaleka - Wikipedia
I Amaleka dia lehilahy iray voalazan'ny Baiboly fa zanak'i Elifaza sy zafikelin'i Esao, araka ny hita ao aminan'ny Bokin'ny Tantara. Lohan'ny fokom-pirenenana edomita atao hoe Amalekita (na Amalesita) izy. Amin'ny teny hebreo dia atao hoe עֲמָלֵק / Amalek izy.
I Timna no anaran-dreniny izay anabavin'i Lotàna avy amin'ny fokon'ny Horita (na Horeana) izay nanan-tany fonenana nikambana tamin'i Edoma. Ao amin'ny Bokin'ny Eksodosy dia voatantara fa nanafika ny Zanak'i Israely (izay vao avy nivoaka an'i Egipta) tsy amin'antony ny Amalekita. Nandresy ny Amalekita rehefa nidina ny tanan'i Mosesy (na Moizy) izay nitazona tehina, fa ny Israelita notarihin'i Josoa (na Jôsoe) kosa no nandresy rehefa nakarina ny tanan'i Mosesy izay notazomin'i Hora sy i Aarona.
Ny taranak'i Amaleka[hanova | hanova ny fango]
Araka ny Bokin'ny Eksodosy dia i Amaleka no filoha mpitarika ny Amalekita izay foko mpivezivezy nanafika ny Hebreo tao amin'ny tany efitr'i Sinay (na Sinaia) raha vantany vao nivoaka an'i Egipta ny Hebreo.
Ao amin'ny Boky voalohan'i Samoela dia notsimbinin'ny mpanjaka Saoly (na Saola) ka tsy novonoina i Agaga taorian'ny fandripahana ny Amalekita rehetra, ka izany dia fanitsakitsahana ny didin'Andriamanitra nampilazaina ny mpaminany Samoela. Izany hadisoana izany dia niteraka ny fahataperan'ny fanjakan'i Saoly.
Ao amin'ny Bokin'i Estera, ny Jiosy natao sesitany avy tamin'ny andron'ny fahababoana tany Babilona dia niaritra ny fandripahana nataon'i Hamàna zanak'i Hamedata, taranak'i Agaga, mpanjakan'ny Amalekita.
Araka ny jodaisma dia ny Amalekita no modely amin'ireo fahavalon'ny Jiosy. Misy ny mihevitra fa taranak'i Amaleka i Hitler, ary isan'izany koa ny olona maro tsy tia Jiosy ka maniry mandrakariva ny handripaka ny vahoaka jiosy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Amaleka&oldid=974570"
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2019 amin'ny 17:06 ity pejy ity.